Ma rabtaa inaad ogaato shayga kaliya ee Shiinuhu uusan ku dayan karin? Way fududahay: "U dhowaaw Shiineys ...
Dhibaatada ka jirta addoonada madow
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 3, 2016 05: 38 No Comments
Waa la duqeeyey, lagana masaafuriyey hal qaarad ilaa wadan kale, waxay u adkaysteen waxkasta: Caruurta hooyadood ka go'day, adoomo ku xidhxidhay meesha ugu hooseysa ee la haysto (25% xamuulku kama noolaan meel kale ...	Akhri wax dheeraad ah
Afro waa taariikhdayada, Afro waa xoogeena, Afro waa noo style
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 3, 2016 04: 26 No Comments
Nin ka soo jeeda Gabon oo leh ashyaa-dhaf astaan ​​ah oo timo dhar ah (v. 1914).	Akhri wax dheeraad ah
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 2, 2016 18: 31 No Comments
Sababta oo ah hidda-wadaha cad waa isbadalka hidda-wadaha ee ragga asalka ah ee midabka - iyo ragga waa isbadalka dumarka asalka ah. Hadda waxaan ugu dambeyntii ka jawaabi karnaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Madadaalada xeryaha NAZIS
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 2, 2016 18: 07 No Comments
Kuwa aan xasuusanin waxyaabihii la soo dhaafay waxay qarka u saaran yihiin inay dib u soo noolaadaan Wax kama ogin wax walba oo ku saabsan Dagaalkii Labaad ee Adduunka. Buuggan, waxaa qoray Serge Bilé (oo hadda ah saxafiga RFO) wuxuu caddeeyaa ...	Akhri wax dheeraad ah
Fahamka taariikhda hoos udhaca Afrika
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 2, 2016 10: 56 No Comments
Taariikhyahannada Chancellor Williams iyo John Henrik Clarke labaduba waxay caddeeyeen in Afrika ay rumeysan tahay dunidnimada Eebbe dadka oo dhan. Tani waxay u oggolaatay inay ...	Akhri wax dheeraad ah
Saboolnimadu maahan shil. Sida addoonsiga iyo midab kala sooca, waxaa sameeyay nin waxaana lagu saari karaa ficillada guud ee aadanaha
Posted By: KongoLisolowaa: Juun 1, 2016 06: 17 No Comments
Raac nagu soo soco / Raac nagu soo daali Twitter, FB, IG, Dailymotion & YouTube @ KongoLisolo ... TOLEKA! By, Nelson MANDELA Akhri wax dheeraad ah
Iska cafi cadaawayaashaada, laakiin ha illaawin magacyadooda
Posted By: KongoLisolowaa: May 30, 2016 12: 12 No Comments
Waxaa qoray, John Fitzgerald Kennedy Akhri wax dheeraad ah
Sep22 02: 42
HI / LO: 25/16 ℃
HI / LO: 25/18 ℃